Najanon'ny polisy ny fampihorohoroana tao Mombasa, Kenya, sa tsy izany?
Home » Lahatsoratra farany farany » Zon'olombelona » Najanon'ny polisy ny fampihorohoroana tao Mombasa, Kenya, sa tsy izany?
Birao fizahantany afrikanina • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Kenya Breaking News • Vaovao • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny hery manokana nataon'ny Kenya dia ny fiderana ankapobeny noho ny hetsika nataon'ny polisy mahery fo tao amin'ny ferry Likoni any Mombasa, Kenya ny alatsinainy teo.
Ny fiderana dia tsy hoe tsy nisy teoria fikomiana nanontany ny polisy ary maninona ny mpanao gazety iray no tonga teny an-toerana naka ny zava-nitranga tamina fakantsary. Ny polisy any Kenya dia mila tosika miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana. Ity tantaran'ny fahombiazana ity dia mety hanohina ny olana sy ny fanohanan'ny vondrom-piarahamonina polisy manjo manerana an'izao tontolo izao mandritra ity areti-mandringana ity.
Ny polisy Kenyana ao an-tanànan'ny morontsirak'i Mombasa dia nisambotra ireo mpampihorohoro amin'ity raharaha be atao ity Likoni ferry niampita ary nahatratrarana basy AK-47 roa, telefaona ary bala.
Ny fandefasana fanontaniana amin'ny twitter hoe maninona no misy mpanao gazety mpahay sary no mora naka an'io bust io.
Nanokatra adihevitra momba ny fifandraisan'ny vondrom-piarahamonina sy ny herisetra nataon'ny polisy vokatry ny toe-draharaha COVID-19 ny zava-nitranga. Fironana eran-tany io.
Ny Likoni Ferry dia serivisy sambo manerana ny seranan-tsambon'i Kilindini, manompo ny tanànan'i Mombasa any Kenya eo anelanelan'ny lafiny nosy Mombasa sy ny ambanivohitra mainoniana an'i Likoni. Fiara roa na efatra mifarana mifandimby miampita ny seranan-tsambo, samy mitondra fifamoivoizana na lalana na an-tongotra.
Raha ny voalazan'ny Tripadvisor, ny Lilkoni dia traikefa tsy maintsy ananan'ireo mpizahatany rehefa mitsidika ny faritra fialantsasatra Mombasa any Kenya.
Ny polisy tao Mombasa, Kenya, dia nisaboka ary nisambotra olona roa ahiana ho mpampihorohoro tao amin'ny lakandranon'i Likoni ny alatsinainy maraina.
Jereo ny horonantsary YOUTUBE nomen'ny mpikambana iray ao amin'ny Birao Fizahan-tany Afrikanina. Nofeperanay ho an'ny olon-dehibe ilay horonantsary noho ny atiny tsy mety amin'ny ankizy.
Ankoatra ny polisy dia nahatratra basy AK-47 roa, magazine roa, antsy lava ary fitaovam-piadiana isan-karazany. mety misy bebe kokoa amin'ity tantara ity sy ny antony namelabelarana azy ary nalamin'ny polisy polisy be herim-po toy ny izy.
Tamin'ny tranga naharitra dimy minitra izay tsy nahalalan'ny olona teny an-toerana, dia nitifitra ny rivotra ireo manamboninahitra, nanampina ny mason'ireo olon-dratsy ary nametraka azy ireo tao anaty fiaran'ny polisy.
Nisy mponina iray nanontany tao amin'ny Twitter hoe: “Ny seho tao amin'ny Likoni ferry Nahasarika ny saiko. Ahoana no nahatonga ny akanjo iray izay miasa miafina, [afaka] nampiditra ny mpanao gazety hahita azy ireo mihetsika? Nihevitra ve izy ireo fa nanao vivery ny ainy sy ny an'ny besinimaro? Misy zava-manjary manjono. ”
Nisy olona iray nanampy hoe: “Hefa tonga ve ireo ekipa fakan-tsary fa teo an-toerana aza b4 ilay tranga? Ary na izany aza, tsy afaka nitifitra izy ireo mba hahitanay maso ny endrik'ireo mpampihorohoro? ”
Loharanom-baovao iray avy any an-toerana no nitatitra fa nanao zavatra tamin'ny vaovao azony ny polisy taorian'ny nisamborana olona ahiahiana ho mpampihorohoro iray vao haingana tany Mombasa, izay nanambara ny antsipirian'ny fanafihana nokasaina hatao.
Ny fisakanana dia nitranga taorian'ny namoahan'ny governemanta amerikana torohevitra momba ny dia ho an'ireo mpitsidika amerikana mikasa ny hitsidika an'i Kenya noho ny loza mety hitranga amin'ny asa fampihorohoroana.
Nentin'izy roa lahy ny fitaovam-piadiana avy tany Lunga Lunga ary niampita ho any Mombasa, izay ahiana fa nikasa hanafika fametrahana fiarovana izy ireo, azo inoana fa tobin'ny polisy.
Niitatra ny fihenjanana tao amin'ny Likoni Ferry ny fiampitana, faritanin'i Mombasa, aorian'ny hetsika fanoherana ny fampihorohoroana dia nihetsika haingana ny faharanitan-tsaina, nandritra ny fotoana nanakanana fiara izay saika hiditra ny sambo miandry amina bala tsy ara-dalàna.
Nanamafy ny zava-nitranga i John Elungata, mpandrindra ny faritra ary nilaza fa hadihadiana amin'ny hetsika kasaina kasaina hatao any Mombasa izy roa.
VIDEO RAW: Ahoana ny fomba nahasamborana olona roa mpampihorohoro nataon'ny Recce Squad sy ny polisy miady amin'ny fampihorohoroana tao amin'ny fantsona fiampitana Likoni-Ferry tao Mombasa androany maraina ary basy AK-47 sy bala marobe no tratra tao anatin'ny fiaraha-miasa. pic.twitter.com/N2UmEDzN0D
- Zakariya Suleiman (@ Sul5KE) Aogositra 23, 2021
Nanambara ihany koa ny polisy fa mbola hisy ny fisamborana.
Mpikambana ao amin'ny Birao fizahantany afrikanina niady hevitra momba ny zava-nitranga tao amin'ny ATB WhatsApp Group izay nilaza hoe: “Nikasa hanapoaka ny sambo maraina izy ireo androany, saingy misaotra an'Andriamanitra nisakana azy ireo ny Hery Manokana.”